Gegada Diyaaradaha Cigaal - Wikipedia
Gegada Diyaaradaha Cigaal
IATA: HGA – ICAO: HCMH
Joogga Heerka badda
ft / 1,348 m
Garoonka Caalamiga ah ee Egal International
Madaarka Caalmiga ah ee Cigaal (Af carabi: مطار هرجيسا إيغال الدولية) waa garoonka diyaaradaha ku taal hawdka caasimada Jamhuuriyada Soomaliland ee Hargeysa. waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, caasimadda Somaliland, caalamku wuxuu aqoonsan yahay Jamhuuriyad iskeed isku magacawday. waxay ka shaqeyneysay 56,000 oo rakaab iyo 2,300 ton oo xamuul ah oo isugu jira 1,750 oo dhul ah.
2 Tiroka Diyaaradaha
Madaarka ayaa la furay 1954, Waxaana furay ciidamadii cirka ingiriiska (RAF), barnaamijka ballaarinta waxaa la bilaabay wax yar ka dib iyo 1958 baabuur, gawaarida iyo dhismaha terminaalka. Madaarka ayaa markaa dib loo casriyeynayey sannadkii 1980-maadkii maamulka Siyaad Barre si ay u qabtaan diyaarado waaweyn oo ay bixiyaan meelo badan oo duulimaadyo ah. 
Intii lagu jiray dhacdooyinkii hogaaminayay dagaalka sokeeye ee Soomaaliya, horraantii 1990-meeyadii, garoonka diyaaradaha ee garoonka ayaa si weyn u dhaawacmay. Si kastaba ha noqotee, xarunta ayaa si tartiib ah loo dayactiray dhowrkii sano ee u xigay.
Madaarka ayaa markii dambe loo beddelay Cigaal ka dib markii uu dhintay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. oo ahaa Raiisal Wasaaraha Soomaaliya 1967-1969 intii lagu jiray midnimadii jamhuuruyadda somaaliyeeed, ka hor inta uusan noqonin madaxweynaha labaad ee Somaliland.
Sannadkii 2012-kii, marin-haweedyada ayaa si ku-meel-gaar ah loo hakiyay iyada oo duulimaadkeedana lagu sameeyay dayactir wayn, oo ay maal-galisay madaxda Somaliland, Sanduuqa Kuwait iyo USAID. Xarunta ayaa markii dambe dib loo furay 17kii Agoosto 2013, iyada oo la sii ballaariyay terminaalka tagitaanka iyo terminaalka imaatinka, iyo sidoo kale shan dabeyleed oo cusub oo dabeylo ah. Xarunta kormeerka xogta dabaysha ee la rakibay ayaa sidoo kale gacan ka geysan doonta kor u qaadista madaarka. 
Tiroka Diyaaradaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Xarumaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Bishii Juun 2014, Dawladda Somaliland iyo Hay'adda Maraykanka ee Horumarinta Caalamiga ah (USAID) ayaa bilaabay mashruuc tamarta dabaysha cusub ee garoonka diyaaradaha. Xarunta cusub ee tamarta dabaysha ayaa hoos imaanaysa Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Macdanta, kaas oo maamuli doona shuraako dadweyne iyo ganacsi gaar ah oo kormeeraya hawlgallada maalinlaha ah. Hindisaha ayaa qayb ka ah Iskaashiga Horumarinta Dhaqaalaha ee Badan, oo ah barnaamij laba-sanno ah oo maal-galiyay $ 14 milyan oo kuyeelan dhinaca tamarta, xoolaha iyo beeraha Somaliland iyo horumarinta qaybaha gaarka loo leeyahay. Shuraakada iskaashigu waxay si gaar ah u tahay in la dhiso tiknoolojiyada tamarta dib loo cusbooneysiin karo, iyada oo xarunta cusub ee tamarta dabaysha la filayo in ay bixiso qiime wax ku ool ah oo ku habboon shidaalka naaftada Waxaa sidoo kale loo xilsaaray in ay awood u siiso labada garoon ee Hargeisa iyo beelaha ku hareeraysan.
01989-06-2828 Juun 1989 Balad, Soomaaliya Fokker F-27 6O-SAZ W/O 700130000000000000030/30
↑ "SOMALILAND: President Silanyo Opens Kuwaiti-Funded Egal Airport Runway Extension". somalilandlive.com.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gegada_Diyaaradaha_Cigaal&oldid=203667"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Luuliyo 2020, marka ee eheed 19:13.